မီးလျှံနှောင့်နှေး TC ထည်ရောင်းချ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 105g / မီတာ? Weave: Twill အကြောင်းအရာ: polyester / ဝါဂွမ်းအကျယ်: 145 / 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုခြင်းကို: အယူနီဖောင်းန်ဆောင်မှုအင်္ဂါရပ်များအဘို့အဝတ်အစား: Flame ဟာနှောင့်နှေးစက်မှုခဝါချမှု Proban? ကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအလေးချိန်ရရှိနိုင် 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အရောင်ကြာရှည်ခံမှုမှာရေဆေးစရာဘို့မီးလျှံ-နှောင့်နှေး * အနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%): 105 g / မီတာ? 155g / မီတာ? 180g / မီတာ? 245g / မီတာ? 260g / မီတာ? 275g / မီတာ? 310g / မီတာ? 315g / မီတာ? 320g / မီတာ? 460g / မီတာ? လက်မှတ်များ: မာခ် 340
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 240g / မီတာ? Weave: ဖဲ 4/1 အကြောင်းအရာ: T40% / C60% ချည်ခင်: 150dx10s အကျယ်: 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုမှု: 85 ° C တွင်စက်မှုအဝတ်လျှော်ဘို့စက်မှုခဝါချမှုရေတွန်းလှန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 2%): အဆိုပါယူနီဖောင်းဝတ်န်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့အဝတ်အစား ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရောင်များကိုက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်စက်မှုမှတာရှည်ခံအရောင်ကြာရှည်ခံမှု: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
T က A / C လွင်ပြင်ထည်ရောင်းချ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 160 g / မီတာ? (4.7oz) မျိုးကိုရက်: 1X1 ရိုးရိုးအကြောင်းအရာ: T65% / C35% ချည်ခင်: 45 / 2x45 /2101x55 အကျယ်: 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုမှု: စက်မှုများအတွက်စက်မှုတာဝန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 2%): အဆိုပါယူနီဖောင်းဝတ်န်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့အဝတ်အစား 85 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အရောင်ကြာရှည်ခံမှုကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရောင်များမှာအဝတ်လျှော်: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 150 g / မီတာ? (4.4oz) မျိုးကိုရက်: 2/1 Twill အကြောင်းအရာ: T65% / C35% ချည်ခင်: 32x32 130x70 အကျယ်: 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုမှု: စက်မှုအဝတ်လျှော်ဘို့စက်မှုတာဝန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 2%) မှာ: အယူနီဖောင်းဝတ်န်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့အဝတ်အစား 85 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုက်ဖြတ်ရန်တာရှည်ခံအရောင်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
ဝါဂွမ်း polyester လွင်ပြင်ထည်ရောင်းချ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 150 g / မီတာ? (4.4oz) မျိုးကိုရက်: 1X1 ရိုးရိုးအကြောင်းအရာ: T65% / C35% ချည်ခင်: 24x24 100x50 အကျယ်: 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုမှု: 85 °မှာစက်မှုအဝတ်လျှော်ဘို့စက်မှုတာဝန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 2%): အဆိုပါယူနီဖောင်းဝတ်န်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့အဝတ်အစား ကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရောင်များကို C အရောင်ကြာရှည်ခံမှု: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
ရှပ်အင်္ကျီအထည် -115gsm ရောင်းချ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 115 g / မီတာ? (3.4oz) မျိုးကိုရက်: 1X1 ရိုးရိုးအကြောင်းအရာ: T65% / C35% ချည်ခင်: 45x45 133x72 အကျယ်: 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုမှု: 85 °မှာစက်မှုအဝတ်လျှော်ဘို့စက်မှုတာဝန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 2%): အဆိုပါယူနီဖောင်းဝတ်န်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့အဝတ်အစား ကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရောင်များကို C အရောင်ကြာရှည်ခံမှု: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
ဝါဂွမ်း polyester ထည်-100gsm ရောင်းချ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 100 ဂရမ် / မီတာ? Weave: 1X1 ရိုးရိုးအကြောင်းအရာ: T65% / C35% ချည်ခင်: 45x45 110x76 အကျယ်: 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုမှု: အကြမ်းခံ 85 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အရောင်ကြာရှည်ခံမှုမှာစက်မှုအဝတ်လျှော်ဘို့စက်မှုခဝါချမှုအိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 2%): အဆိုပါယူနီဖောင်းဝတ်န်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့အဝတ်အစား ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရောင်များကိုက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်စက်မှုမှ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ